LOZAM-PIFAMOIVOIZANA RN 12 : Mpandeha miisa 3 naratra mafy vokatry ny tandrevaky ny mpamily
Nisesisesy tato ho ato ny trangana lozam-pifamoivoizana miseho any amin’ny lalam-pirenena faha-12 iny . 17 octobre 2019
Raha tsiahivina dia vao tamin’ny Sabotsy faran’ny herinandro lasa teo no nisy lozam-piarakodia nahafatesan’olona miisa fito , ny 15 oktobra lasa teo indray anefa dia fantatra fa fiara “Mercedes sprinter” iray mpitatitra olona no niharan-doza. Araka ny fanampim-panazavana voaray bebe kokoa avy amin’ny Zandarimariam-pirenena omaly dia ny talata lasa teo, tokony ho tamin’ny 11 ora maraina tao Vondranga Ambohimandroso no nivadika ny fiara izay voalaza fa noho ny tsy fitandreman’ny mpamily. Marihina fa avy aty an-drenivohitra hihazo an’i Vangaindrano ity fiara ity no izao tra- doza izao.
Vokany, miisa telo ireo naratra mafy izay noentina notsaboina haingana tao amin’ny Hopitalibe Manakara. Tsy nisy kosa ny aina nafoy. Manoloana ity tranga ity ihany dia nanao fitarainana ireo mpandeha mahakasika tandrevaka nataon’ ilay mpamily ka nahatonga ny loza toy ny fandehanana mafy loatra, tsy fanajana ny hafainganam-pandeha. Misokatra ny fanadihadiana ka ny Borigady ao Manakara no mandray an-tanana izany.